Dowlada Suuriya oo weli wada Duqeynta Dadka Rayidka ah xilli dalkeeda ay joogaa gudi ka socda Jaamacada Carabta – SBC
Dowlada Suuriya oo weli wada Duqeynta Dadka Rayidka ah xilli dalkeeda ay joogaa gudi ka socda Jaamacada Carabta
Wararka laga helayo gudaha wadanka suuriya ayaa ku waramaya in ciidamada amaanka dalka suuriya ay dil u geysteen Dad rayid ah oo aad u farabadan xilli uu socdo Kormeerka ay samaynayaan Gudiga ka socda Jaamacada carabta
Ciidamada amaanka Dalka suuriya ayaa lagu waramayaa in ay rasaas si ula kac ah ugu fureen kumanaan kun oo qof kuwaasi oo dibadbaxyo ka hor sameynayay gudiga korjoogtada ah ee Jaamacada Carabta.
Kooxaha ka wada Dhaqdhaqaaqa Wadanka siiriya ayaa sheegay in ku dhawaad 35 qof oo hor leh lagu dilay Gudaha wadanka ka dib marki isku dhacyo cusub oo dhexmaray ciidamada amaanka iyo dadka dibad baxyada ka dhigaya Magaalooyinka Hama, Deraa iyo Homs.
Ciidamada amaanka Suuriya ayaa waxaa xilligan lagu eedeynayaa inay rasaas nool nool u adeegsadeen dadka dibad baxyada ka dhigaya wadanka kaasi oo looga soo horeedo hogaanka dalka Suuriya ee Bashar Al asad.
Warbaahinta Qaranka ayaa soo baahiyay Sawiro muujinaya dibad baxyo lagu tilmaamay kuwo lagu taageerayo maamulka Bashaar iyaga oo dhinaca kale ku tilmaamay dibad baxyada kuwo lagu diidan yahay in Dowladaha reer galbeedka ay soo farageliyaan Arimaha Dalka Siiriya.
Dowlada wadanka Suuriya ayaa waxaa ay dibad baxyada ka socda Wadanka sheegtay inay ku weyday in 2,000 oo ka mid ah ciidamada amaanka ka dib isku dhacyda dhexmaraya ciidamada iyo dadka Ka soo horjeeda.
Qaramada midoobay ayaa dhinaceeda ku eedeysay Dowlada suuriya inay dishay dad ka badan 5,000 oo qof oo rayid ah kuwaasi oo ay ciidamada ku dileen gudaha suuriya tan iyo inta ay biloowdeen dibadbaxyada kacdoonka ah ee biloowday Bishii March ee Sannadkan.
Gudiga korjoogtada ah ee ku sugan suuriya ayaa tiradoodu gaareysa 60 xubnood waxaana ay wadaan qorshe la doonayo in lagu dhimo baabinta dowlada suriya ay ka geysanayso deegaanada qaar ee dalka